Izakhamuzi zaseNquthu zithole elinye ithuba lokuvotela abaholi | News24
Izakhamuzi zaseNquthu zithole elinye ithuba lokuvotela abaholi
Nquthu – Izakhamuzi zaseNquthu zithola elinye ithuba lokuvotela abaholi bazo okhethweni olubhekwe ngabomvu lohulumeni basekhaya oluzoba kumawadi angu-17 ngoLwesithathu.
Uhulumeni waKwaZulu-Natal wahlakaza umkhandlu ngoFebhuwari ngemuva kokwehluleka ukukhetha abaholi abasha, okubalwa kubona uMeya kanye noSomlomo, kulandela ukhetho lohulumeni basekhaya lwango-Agasti 3.
UMasipala waseNquthu yiwona kuphela kuleli ongenayo iMeya.
OLUNYE UDABA: Ubuyela enkantolo osolw angokubulala ingane,3
Bangu-81 085 abantu ababhalisele ukuvota eNquthu, ngokusho kwesitatimende se-Electoral Commission of SA (IEC).
Izikhungo zokuvota zivulwe kusukela ngo-07:00 kanti kulindelele zivalwe ngo-19:00.
Bangu-359 abangenele ukhetho kanti angu-14 amaqembu ezombusazwe, okubalwa kuwona i-ANC, IFP, NFP, EFF, DA, kanye neBlack First Land First.
Ngonyaka odlule bangu-58.27% abantu abaphuma ukuzovota. I-IFP yanqoba izihlalo ezingu-15, i-ANC ezingu-14, i-NFP yathola ezimbili, kwathi iDA ne-EFF bathola isihlalo esisodwa iqembu ngalinye.